Ra’iisul wasaaraha oo kulan la qaatay maamulka gobolka Banaadir iyo haweenka Soomaaliyeed (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaaraha oo kulan la qaatay maamulka gobolka Banaadir iyo haweenka Soomaaliyeed (SAWIRO)
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa maanta kulan qado sharafeed ah la qaatay guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Yuusuf Xasan Jimcaale, haweenka iyo xildhibaanada haweenka ee ku jira labada aqal ee Baarlamaanka.
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo hadal kooban ka jeediyay kulanka ayaa sheegay inay si buuxda u taageersan yihiin qoondada haweenka ee goleyaasha qaranka, isagoo kula dardaarmey inay u midoobaan gaarista hadafkooda siyaasadeed, isla markaana ay door weyn ku yeeshaan talada iyo dib u dhiska dalka.
Sidoo kale, ra’iisul wasaaraha ayaa haweenka Soomaaliyeed ku ammaanay dadaalka ay muujiyeen, waxaana ugu baaqay inay ka qeyb qaataan dadaalada la doonayo in lagu samata-bixiyo shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu ku dhufteen.
Dhinaca kale, ra’iisul wasaare Kheyre ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka go’an tahay sidii muhiimadda koowaad loo siin lahaa dadka u dhimanaaya gaajada iyo biyo la’aanta islamarkaana xukuumadda uu soo dhiso doono ay ka shaqeyn doonto u adeeggidda baahiyada gaarka ah ee shacabka Soomaaliyeed, si looga gudbo abaaraha iyo dhibaatooyinka ka dhasha ee had iyo jeer soo noq-noqda.
Ugu dambeyntii, guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale) iyo qaar ka mid ah haweenkii kulanka ka hadlay ayaa uga mahadceliyey ra’iisul wasaaraha dadaalkiisa ku aadan in il gaar ah lagu eego xaaladda daran ee ka dhalatay abaaraha ka jira gobolada dalka Soomaaliya.